महामारी र अर्थतन्त्रमा प्रभाव | Nagarik News - Nepal Republic Media
जब वि.सं. २०१७ देखि पञ्चायत सुरु भयो। देशको अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो परिवर्तन भएन। जुन शासन परिवर्तनका लागि जस्तै सावित भएन। २०३१ सालमा समन्वय परिषद् खुल्यो, एनजिओ, आइएनजिओ खुले। जसका कारण सिपमूलक कार्यक्रमहरू अलिअलि भए तर खासै उपलब्धि भने देखिएन। वि.सं. २०४४मा भारतले नाकाबन्दी लगायो। सबै पारबहन केन्द्र बन्द गरायो। जसका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलै असर पुग्यो। २०४८ को राम्रो अर्थनीतिका कारण अलि उकालो लागेको अर्थतन्त्र २०५२देखि ६२ सम्मको माओवादी र राज्य पक्षको युद्धका कारण जीर्ण अवस्थामा पुग्यो। २०६४ मा माओवादी प्रथम पार्टी बनेसँगै योजना देखेर सबैमा आशा पलायो तर त्यो साकार हुन सकेन।
फेरि २०६७ मा माओवादीले काठमाडौँमा पाँच दिनसम्म बन्द गरायो। यसले ठूलै क्षति हुन पुग्यो। २०७४ सम्म आइपुग्दा विभिन्न दलले गरेका बन्दका कारण पनि ठूलै असर पर्‍यो। २०७२ मा फेरि भारतले नाकाबन्दी लगायो। जसका कारण नेपाली जनताले दुःखसँगै अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्‍यो। धुकधुक रहेको अर्थतन्त्रमा फेरि मुलुकमा २०७४ मा तीन चरणको चुनाव भयो। मुलुकमा ७५३ स्थानीय तहको जन्म भयो। प्रदेश,महानगरपालिका,नगरपालिका,स्थानीय तहसहितको आर्थिक क्षेत्रमा भारतको चुनौती देखिएकै थियो। फेरि कोभिड–१९ का कारण विश्वसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलै ह्रास आउने देखिएको छ। विश्वसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको अबको बाटो कहाँ पुग्नेहो? सबैको चासोको विषय बनेको छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७७ १४:४३ आइतबार